संसारभर रोजगारमा कटौती, विदेशीएका नेपाली फर्किनु परे के होला ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/संसारभर रोजगारमा कटौती, विदेशीएका नेपाली फर्किनु परे के होला ??
कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएपछि विश्वका विभिन्न कम्पनीले ब्यापक कर्मचारी कटौती गरेको छन् । विश्वले कामदार कटौती गर्दै गए रोजगारका लागि विदेशीएका नेपालीको रोजगार गुम्ने खतरा पनि बढेर गएको छ । यदि रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किनु परे के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । अहिले धेरैजसो देशले पर्यटन क्षेत्रका कामदार कटौती गरिरहेका छन् । ब्रिटिस एयरवेजले कम्पनीलाई संकटमा फस्न नदिन कर्मचारी कटौति गर्ने निर्णय पहिले नै गरेको छ ।
यता, फ्रान्सको ठूलो बैंक सोसाइटि जनरलले पनि विश्वभर रहेका आफ्ना कम्पनीबाट १ हजार ६ सय कामदार कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न उद्योगका मजदुरहरुको रोजगार प्रभावित छ । पर्यटन उद्योगका कर्मचारी सबैभन्दा बढी मारमा छन् ।अन्तर्राष्टिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा सवा एक अर्ब मानिसको रोजगार प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताएको छ । यसमा धेरैले रोजगारी गुमाउने र केहीको तलबमा कटौती हुने भनिएको छ ।
आइएलओको प्रतिवेदनमा अहिले विश्वभर पूर्ण वा आंशिक रुपमा कोरोना भाइरसका कारण करिव २ अर्ब ७० करोड कामदार प्रभावित भइरहेको उल्लेख छ । यो समग्र जनशक्तिको ८१ प्रतिशत हो । अमेरिकामा ४३ प्रतिशतमा रोजगारको समस्या हुनसक्ने आइएलओको प्रतिवेदन छ । अहिले विश्व साझा समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । मानव जातिकै दुश्मनका रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना भइसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । विश्व नै यतिवेला लकडाउनको स्थितीमा छ जसले आर्थिक गतिविधि हुन पाएको छैन । कसैले आफ्ना कामदारलाई बेतलबी विदामा घर फर्काइसकेका छन् भने कसैले कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।